१३ बर्से बालिकालाई ४ जनाले पालैपालो… (भिडियो) – Classic Khabar
August 14, 2021 93
पथरीको भुटानी शरणार्थी शिविरमा रहेकी बालिकाको अवस्था एकदमै नाजुक रहेको त्यहाँ बालक्लव सञ्चालन गर्ने महिलाले बताएकी छिन । उनले बालिकासँग धेरैबेर कुराकानी गरेर सोधेपछि बालिकाले यस्तोसम्म सुनाइन कि सुनेर सबैका आँखा रसाए । केटि भएको थियो त बालिकालाई कसरी चारजनाले पटकपटक यस्तो गरे त सुरूदेखिको सम्पूर्ण नालीबेली तलको भिडियोमा हेर्नुहोला बालिकाले यस्तोसम्म सुनाइन ।
Prevशोभित बस्नेतको चलचित्र ‘डाँडाको बरपीपल’मा अभिनेता भुवन केसी र शिव श्रेष्ठ संगै आभिनय गर्दै
Nextश्रीमानले आफु बसेकै कोठामा अर्की केटि लिएर आएपछि….
बिरामि बिनितालाई काठमाडौंबाट को आयो भेट्न ? यसरी सुनाइन तोते बोलिमा मिठा गितहरु (हेर्नुस् भिडियो )
मनसुन सक्रिय भएसँगै निरन्तर वर्षा, उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
प्रेम बिबाह गरि भित्राएको श्रीमतीले बुढेसकालमा घर फर्कदा श्रीमती अर्कैसँग टाप कसिन, १२ वर्ष सम्म विदेशमा कमाइको सबै सम्पत्ति नाठोलाई खुवाएपछी श्रीमान् रुदै रुदै मिडियामा (भिडियो सहित)